"Ndiri Baba": kure naMeghan uye Archie Prince Jack jekete inopa mutero mukuru kumwanakomana wake achangoberekwa - TELES RELAY
HOME » mwe "Ndiri Baba": kure naMeghan uye Archie Prince Jack Jack Jack ndiyo mutero mukuru kumwanakomana wake achangoberekwa
"Ndini Baba": kure neni Meghan uye Archie Prince Harry jekete ndiyo mutero mukuru kumwanakomana wake achangoberekwa
Mazuva matatu mushure mekumubata mwanakomana wake Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Prince Harry aifanira kusiya mhuri yake kwekushanya kwemazuva maviri kuHague, Netherlands.
Akaenda ikoko kundotanga gore rimwechete rebasi kuInvictus Games 2020. Icho chinhu chakakosha kune muchinda ane ruvara rutsvuku. I9 inogona, baba vangu vaduku vakapedza nguva yake kune vanhu vazhinji, uye kusemwe hakuna kumusiya chiso chake!
Yakatumirwa naDuke uye Duchess yeSussex (@sussexroyal) on May 9, 2019 pa 7: 30am PDT
A kutora mutero
Archie Harrison ane mazuva mana chete, asi akatochinja hupenyu hwaHarry. Mutungamiri aishuva mwana wake akaberekwa patsva sezvaakazadzisa mabasa ake oumambo kuThe Hague.
Post by Sussexs.LIFE (@ sussexs.life) on May 9, 2019 pa 11: 17pm PDT
Mutungamiri Harry ainakidzwa sa peacock akapfekedza jekete yemitambo yakasviba, iyo iyo Invictus Games logo yakagadzirwawo. Asi chiyeuchidzo chakagoverawo mutsara wakajeka wejena: "Ndiri Baba / Ndiri baba". Whaouuuuu!
Post by Beard & Butter (@beardxbutter) on May 9, 2019 pa 11: 15pm PDT
Hurumende Harry akawanawo Sussex vana zvipo, kusanganisira rucksacks, iyo yakanyangadza mwoyo wechinda.
Harry zvechokwadi achava baba vakakura! Princess Diana angadai akave anozvikudza!
The Yellow Letters spell I AM DADDY 🥰..
- RoyalDreams🌷🐝 (@RoyalDreams5) Dai 9, 2019
Tsamba dzemajaya dzinoita mutemo wandinenge ndiri DAD
Saka zvinonakidza kuti tsamba idzi dzinenge dzichinyora Ini Baba ndakatariswa! Fadzai kune vanozvikudza vabereki uye mugamuchire kunyika pasi Archie!
- Karin Hatch (@GmaiKarin) Dai 9, 2019
Saka zvinonakidza kuti tsamba "Ini Ndibaba" dzinotsanangurwa! Congratulations kuvabereki vanozvikudza uye vakagamuchira Archie baby world!
Akanga akamirira kwenguva refu kudai kupfeka chinhu chakadai. Ndiri kufara kwazvo nokuda kwavo.
- Kimberly Sinclair (@Kimberl06442051) Dai 9, 2019
Akamirira kwenguva refu kuti apfeke chinhu chakadai. Ndiri kufara kwazvo nokuda kwavo.
Aww, unozvikudza zvikuru "DADDY" izvi zvinoshamisa kuona
- 🌺🐝MeyHive United isu tinomira MelanatedMonaMegBOT🥑 (@DeelightRI) Dai 9, 2019
Whaouu anozvikudza zvikuru "DADDY" zvinoshamisa kuona
Unogona here kutenda kuti Prince Harry ikozvino baba? Nguva inorambidza pasina!
Ohio State Inowana Dhiyabhorosi Dhiyabhorosi Dhigirii 177 Students - New York Times
Pasingapfuuri nemakore 17 apfuura, akabudisa mifananidzo yeCONIC pornographic mum manga uye katatu - xnxx